Harry Lillis Crosby ( Tacoma, United States, 3 maypole ka 1903 - Alcobendas, Spain, 14 Okthoba ka -1977 ), kangcono eyaziwa ngokuthi Crosby Bing kwaba umculi ( crooner ) kanye actor American nge-career esithathe amahlanu wacabangela Inkanyezi yokuqala yemultimedia, i-Bing Crosby yayiyisitolo somculo esithengiswa kakhulu futhi saphumelela kunazo zonke ngekhulu lama-20.
UCrosby ubengumholi kwezokuqopha umlando, izilinganiso zomsakazo, kanye nokuthola imali yama-movie amakhulu - ungomunye wabalingiswa ababaluleke kakhulu nabanomthelela kuleli khulu lama-20 emhlabeni jikelele. Wayengomunye wabaculi bokuqala be-multimedia. Phakathi kuka-1934 no-1954, uCrosby waba nokuthengisa okungabekezeleleki ngama-albhamu akhe, izilinganiso ezinhle eziteshini zomsakazo namafilimu adume umhlaba.
Uvame ukubhekwa njengomunye wabalingisi bomculo abadumile emlandweni futhi namuhla Izwi lomuntu orekhodwe nge-elekthronikhi. Ukuhlonishwa kobuciko bukaCrosby kuyinto indawo yonke, kubaluleke kakhulu ukusho ukuthi wayengomunye wezikhuthazo ezinkulu kwabanye abadlali besilisa abakhulu ababemsekela, njengoFrank Sinatra, uPerry Como, uDean Martin, uJohn Lennon , U-Elvis Presley, uMichael Bublé ukubiza abambalwa. I-Bing Crosby ithengise amarekhodi angaphezu kwezigidi eziyinkulungwane emhlabeni wonke kuze kube manje mhlawumbe ngumthengisi omkhulu kunayo yonke emlandweni, kanye nengoma ethengiswa kakhulu emhlabeni wonke enesihloko esithi White Christmas, amakhophi angaphezu kwama-50,000,000 athengiswe emhlabeni wonke.
UCrosby wayedumile futhi ethandwa kakhulu maphakathi nekhulu lama-20 emhlabeni, kangokuthi ukuhlolwa okwenziwa emuva ngaleso sikhathi kwembula ukuthi uCrosby wayedumile futhi ehlonishwa kakhulu kunoPapa Pius XII ngaleso sikhathi.
Impumelelo eshadi lakhe ihlala ihlaba umxhwele: amakhadi angama-396 ngamanye, kufaka phakathi ama-41. 1 Uma ubala kaningi ukuthi "kukhulunywa ngoKhisimusi" omhlophe, lokho kungafinyelela lelo nani lifinyelele ku-43, ngaphezulu kokuthi Beatles no-Elvis Presley bahlangene. UCrosby wayenezingoma ezihlukile zamashadi unyaka ngamunye phakathi kuka-1931 no-1954, kanti futhi wayenezingoma ezingama-24 ezihlukene ezazithandwayo ngo-1939 kuphela.
UBing Crosby uqophe ukurekhoda okungaphezulu kuka-2 000 kwezentengiselwano nemisakazo ecishe ibe ngu-4,000, nohlu olubanzi lokuvela kwifilimu nakuthelevishini, ungumculi oqoshiwe kunabo bonke emlandweni. IBing Crosby ithole amarekhodi angama-41 No. 1 kumashadi (ama-43 afaka izihloko zesibili nezesithathu ze- "White Christmas"), ngaphezulu kweThe Beatles enayo (24) no-Elvis Presley onamarekhodi (18). Ukuqoshwa kwakhe kufinyelele emashadi izikhathi ezingama-396, ngaphezulu kukaFrank Sinatra (209) no-Elvis Presley (149) kuhlangene.
Retrieved from "https://zu.wikipedia.org/w/index.php?title=Bing_Crosby&oldid=60146"
Last edited on 19 uNhlaba 2020, at 15:36
Leli khasi laqeda ukuhlelwa ngo-19 uNhlaba 2020, nge-15:36.